Sebeyaziwa abesifazane ababili ababulewe KwaMashu | Scrolla Izindaba
Sebeyaziwa abesifazane ababili ababulewe KwaMashu
Ngeviki eledlule izidumbu ezimbili zabesifazane abancane abangaziwa zitholwe ngumuntu obedlula ngendlela ehlathini eduze nasemtholampilo waKwaMashu eThekwini.
Manje amaphoyisa athi lezi zidumbu ezitholakele esinye esikaErin King oneminyaka eyi-18 ohlala eduzane naKwaMashu e-Newlands East, esinye ngesikaXolile Mdletshe oneminyaka eyi-15 obehlala kwesinye isigceme khona kwaMashu.
Amaphoyisa aKwaZulu-Natali athe lezi zidumbu ezimbili zitholakale namanxeba anyantisa igazi okudutshulwa ekhanda.
Lokhu kuze ngemuva kweviki kutholakale isidumbu sikaSanelisiwe Mhlongo oneminyaka emine okusolwa ukuthi wabulawa yisihlobo esisondelene naye esineminyaka eyi-15 – naso satholakala ehlathini eduze nekhaya lakhe kwaMashu.
“Laba abashonile akukaze kubikwe ukuthi balahlekile, ngoba imindeni yabo ibingazi ukuthi bakuphi,” kusho okhulumela amaphoyisa u-Brigadier uJay Naicker.
Uphiko lwabaphenyi esifundazweni okuyibona abaphethe leli cala – namanje basaphenya ngokubulawa kukaKing noMdletshe.
Okwamanje umsolwa oneminyaka eyi-15 ecaleni likaMhlongo ubelindeleke ukuba avele enkantolo yemantshi yaseNtuzuma ngoLwesithathu ukuyofaka isicelo sebheyili.
Abakwa-Scrolla.Africa balandela le ndaba ekhulayo.